Indlela Yokugcina Iingcamango Zakho Ngaphandle Kwebali
Uyakuva onke amaxesha - intatheli kufuneka ibe yinjongo kwaye ilungile. Ezinye iintlangano zeendaba zize zisebenzise le migaqo kwizivakalisi zabo, zibango zithi "zilungele kwaye zilinganise" kunabathengisi babo. Kodwa yiyiphi injongo ?
Iinjongo kuthetha ukuba xa begubungela iindaba ezilukhuni, abathathi-ntatheli abachazi iimvakalelo zabo, ukunyanzelisa okanye ukubandlulula kwamabali abo. Bakwenza oku ngokubhala ibali ngokusebenzisa ulwimi olungathathi hlangothi kwaye kugweme ukubala abantu okanye amaziko ngeendlela ezilungileyo okanye ezimbi.
Kodwa ngenxa yokuqala intatheli ejwayele ukubhala iincwadana zesithenjwa okanye ukungena kwamaphephandaba, kunokuba nzima ukwenza oku. Esinye isicupu kuqala ukuba intatheli iwele kuyo ukusetyenziswa rhoqo kwezichazi. Iinjongo zikwazi ukululaza iimvakalelo zomntu malunga nesifundo.
Abaqhankqalazi abangenangqondo babonisa ngokubhekiselele kwimigaqo-karhulumente engalunganga.
Ngokusebenzisa amagama athi "ongenalwazi" kunye "nokungalungi" umbhali uye wakhawuleza ukuvakalisa iimvakalelo zakhe kwimbali - abaqhankqalazi banesibindi kwaye nje ngenxa yabo, imigaqo karhulumente ayiphutha. Ngenxa yeso sizathu, abapapasho beendaba ezinzima bavame ukuphepha ukusebenzisa izichazi kumabali abo.
Ukunyaniseka kuthetha ukuba ababalatheli bembali ibali kufuneka bakhumbule ukuba kukho amacandelo amabini - kwaye ngokuphindaphindiweyo-kwiimeko ezininzi, kwaye ukuba ezo ngcamango zimele zinikezwe ngendawo elinganayo naliphi na ibali leendaba .
Masithi ibhodi yesikolo ihlala ixubusha ukuba ingavali iincwadi ezithile kwiilayibrari zesikolo.
Abemi abaninzi abamele amacandelo omabini akhona.
Intatheli ingaba neengxaki ezinzulu malunga nesi sifundo. Nangona kunjalo, kufuneka axoxwe nabahlali abaxhasa ukuvalwa, kunye nabachasayo. Kwaye xa ebhala ibali lakhe, kufuneka ahambise izibini zombini kwiingxoxo ezingathathi hlangothi, enika amabini omabini alinganayo nendawo.
Injongo kunye nokulingana akusebenzi nje kuphela indlela intatheli ebhala ngayo ngombandela, kodwa nendlela aqhuba ngayo kuluntu. Umnyathelisi makangabi yinjongo kuphela kodwa abuye athengise umfanekiso wokuba nenjongo kunye nefanelekileyo.
Kwiforum yebhodi yesikolo, intatheli inokwenza konke okusemandleni ukuxoxisana nabantu abavela kumacala omabini empikiswano. Kodwa ukuba, phakathi kwintlanganiso, uyasukuma kwaye aqale ukukhupha izimvo zakhe kwincwadi yokuvalwa kwaye ukunyaniseka kwakhe kuphazamiseke. Akukho bani oya kukholelwa ukuba unokungenangqiqo kunye nenjongo xa beyazi ukuba umi.
Ukuziphatha kwebali? Gcina izimvo zakho kuwe.
Kukho imibala embalwa ekufuneka uyikhumbule xa ucinga ngokubhekiselele kwimilinganiselo kunye nobulungisa. Okokuqala, loo mithetho iyasebenza kubapheli beendaba ezilukhuni, kungekhona kubhala bekhompiyutha kwiphepha le-op-ed, okanye i-critic critic esebenza kwicandelo lobugcisa.
Okwesibini, khumbula ukuba ekugqibeleni, intatheli zikhangele inyaniso. Kwaye nangona kubalulekile ukunyaniseka nokunyaniseka, intatheli akufanele ivumele ukuba bangene endleleni yokufumana inyaniso.
Masithi ungumnyathelisi ovale iintsuku zokugqibela zeMfazwe Yehlabathi II, kwaye alandela imikhosi ye-Allied njengoko ikhulula iinkampu zoxinzelelo.
Ungena enkampini enjalo kwaye ubone ubungqina bamakhulu ama-gaunt, abantu abaxhambileyo kunye nemizimba yezidumbu.
Ngaba wena, ngomgudu wokuba nenjongo, udliwano-ndlebe neli lijoni laseMelika ukuba lithetha ngendlela elibi ngayo, ngoko uthethathe igosa likaNazi ukuba ufumane elinye icala lebali? Akunjalongo noko. Ngokucacileyo, le yindawo apho izenzo ezimbi zenziwe khona, kwaye ngumsebenzi wakho njengomnyatheli ukuba adlulisele loo nyaniso.
Ngamanye amagama, sebenzisa ukulungelelanisa nokulingana njengezixhobo zokufumana inyaniso.
Iingcebiso ezi-5 zokuphucula iziqu zakho zokudansa
UDarius Rucker utshintshela kwilizwe eliya ku-Off